नेपाली र फिलिपिनोको जोडीः सवैको छैन जोया र जीवनको झैं वियोगान्त - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
मध्यम वर्गिय परिवारकी जोया फिलिपिन्सबाट काम खोज्न दुबई आईन । केएफसी (केन्टुकी फ्राइड चिकन) मा काम पनि पाईन । काम गर्दै गर्दा आफ्नै सहपाठी जीवनसँग माया बस्यो । जीवन दुव्र्यसनीको आरोपमा दुबईमा जेल परे । जोयाले आफ्नो २-३ महिनाको तलब खर्च गरेर जेल बाट छुटाउने प्रयास गरिन । जीवनलाई दुबइबाट डिपोर्ट गरिएसँगै जोया पनि एक महिने भिषामा नेपाल आईन । नेपालमा आएर विवाह दर्ता गरिनन, गर्न सकिनन अथवा जीवनले गर्न मानेनन । २ छोरालाई भने जन्म दिएर आमाको भूमिका निर्बाह गरिन । अहिले उनी जीवनको देशलाई छोडेर आफ्ना दुई नाबालक छोराहरुलाई लिएर फिलिपिन्स फिर्ता जादैछिन पैसा कमाएर फेरी नेपाल घुम्न आउने बाचा सहित । तर जाँदा जाँदै जोयाले भनेको २ वटा वाक्यहरु निकै मार्मिक र जीवन प्रतिको उनको मायामा कत्ति पनि ह्रास नआएको झझल्को दिने खालका छन, 'टेक केयर अफ योर मम' र 'आई वील वेट फर यू ।'
जोया प्रति धेरैले सहानुभुती देखाए । जोया र जीवनका दुई नाबालक बच्चालाई अनागरिक बनाएको बारे धेरैले दुःख ब्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले लिएको भिषाको जरिवानालाई लिएर आलोचना गरिए । मेरो पनि उत्तिकै सहानुभुती छ जोया र ती दुई निर्दोष नाबालक प्रति । यो हप्ताभर अनलाइनमा धेरैले पढेको मार्मिक समाचार हो ।
जोया दुबईमा कार्यरत थिईन । आफु पनि दुबईमै रहेको हुनाले यो घटना र यस्तै घट्नासँग जोडिएका अलग पाटाहरुलाई लेख्ने प्रयास गरेको हुँ ।
के तपाईंलाई थाहा छ ? दुबईमा धेरै जोयाहरु छन । अनी धेरै जीवनहरु पनि छन । अझ तपाईंलाई खुलेर भन्ने हो भने, त्यस्ता अनागरिक बनेका धेरै नेपाली छोराछोरीहरु अहिले फिलिपिन्समा होलान । दुबईका हरेक मलहरुमा जोया र जीवनका जोडीहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । ती जोया र जीवनहरु एउटै कोठामा बस्छन, सुत्छन र उठ्छन । केही नेपाली बालबच्चाहरु अनागरिक बन्दै फिलिपिन्स तिरै जन्मिए होलान त केही जन्मिन नपाउदै, भ्रुण हुन नसक्दै मारिए होलान । तर अक्सर घटनमा फिलिपिनो महिला गर्भपतन गराउँदैनन् । युएईमा कार्यरत हुँदा गर्भवती भएमा उनीहरु फिलिपिन्स जान्छन् र उतै बच्चा जन्माएर त्यहिं छोडेर पुनः युएई आउँछन् । मानव जीवनमा जोया र जीवनका प्रारम्भिक घटनाहरु दुबईमा धेरै घट्छन । ती सबै घटनाक्रम नेपथ्यमा नै बिलाए र फेरी पनि बिलाउदै छन ।
तर सबैजना जोया र जीवन जस्तै पनि छैनन । ती सबैले सुसुप्त जीवनका शुक्रकीटहरुलाई यसै मिल्काएनन पनि छैनन । मैले सामाजिक संजालमा जोया र जीवनको माया र खेदले भरिपूर्ण कथाहरु पढे पछी केही सफल जोया र जीवनका कहानी किन नलेख्ने भनेर सोचें । यो बिषयलाई उठान गर्न प्रेरित गर्नु हुने एनआरएनए आईसीसी सदस्य गोपाल कंडेल प्रति आभारी छु ।
भुकम्प पीडित र बाढी पीडित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक अत्तरपुर-८ का किशोर शाक्य बिगत ११ बर्ष देखि युएईमा छन । उनले जेन शाक्यसँग आज भन्दा ८ बर्ष अगाडि लगनगाँठो कसे । अहिले उनीहरुको ६ बर्षिय एन्टोन शाक्य र १ बर्षिय एन्ड्रियु गरी २ छोरा छन । सानो परिवार सुखी परिवार रहेको किशोर छुट्टी मनाउन कहिले काँही फिलिपिन्स जान्छन त कहिले काँही नेपाल जान्छन । नेपालमा रहेका बुढा बुवा र आमालाई चाहिने खर्च बेला बेला पठाइ रहन्छन । जेन पनि आफ्ना बुवा आमालाई खर्च पठाइरहन्छिन । उनीहरु दुबै अफिसमा काम गर्छन् । जीवनमा हाँसेकै छन, खुशी छन ।
एक दिनको कुरा हो । म रस अल खैमहको मनार मलमा कफी पिएर बसिरहेको थिएँ । म सँगै एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलासम्म किशोरलाई म चिन्दिन थिएँ । मेरै अगाडिबाट एक जोडी फिलिपिनो जस्ता देखिने नेपाली गए । मंगोलियन अनुहार रहेकोले मैले फिलिपिनो होलान भनेर त्यत्ती ध्यान दिएको थिएन । मसँगै रहेको साथीले उनीहरुलाई देखाउदै नेपाली केटाले फिलिपिनो विवाह गरेको भनेर नाक खुम्च्यायो । उनीहरुको जीवन हो, खुशी देखिन्छन, ठिकै छ नि जो विवाह गरे पनि, आफ्नो कर्तब्य भुल्नु भएनू मैले यसै भनेको थिएँ ।
यौनको मामिलामा फिलिपिनो महिलाहरु खुला र स्वतन्त्र हुन्छन । मन मिले र माया बसे उनीहरु नेपाली मात्र हैन भारतीय, अरबी र अन्य देशका नागरिकसँग विवाह गरेर बसेको धेरै देखेको छु । र प्रायः तिनै देशका नागरिकहरुले भने किन हो किन फिलिपिन्सका महिलाहरुलाई त्यत्ती राम्रो नजरले पनि हेर्दैनन । मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो शुरुशुरुमा । तर मैले मेरो सोचलाई परिवर्तन गरेको छु । आजकाल नेपाली महिलाहरुको पनि कुनै कमी छैन यौनजन्य कार्यहरुमा । व्वाईफ्रेन्ड बनाउने र पैसा कमाउने उद्देश्य बोकेका हाम्रै नेपाली चेलीबेटीहरुको पनि कमी छैन युएईमा । गैर कानुनी यौनजन्य कार्यमा अविवाहित नेपाली महिला हुन् वा नेपालमा रहने आफ्ना श्रीमानलाई थाङ्नामा सुताएर यहाँ मोजमस्ती गर्ने श्रीमतीहरु हुन् दुनियाँका यौनकर्मी भन्दा केही कम छैन नेपालीहरु दुबईका गल्लीहरुमा । तर यसको अर्थ सवै यस्तै हुन् भन्न खोजिएको भनें होइन । तसर्थ अब हामीले कुनै नेसनालिटीलाई लिएर धारणा बनाउनु बेकार रहेछ ।
संस्कृति र रितिरिवाजमा हामी भन्दा उनीहरु फरक छन । धेरै नेपालीहरु हिन्दू छन, धेरै फिलिपिनोहरु क्रिस्चियन । हामी पूर्णतः पितृसत्तात्मक समाज र सोचमा छौ, उनीहरु अली बढी मातृ सत्तात्मक समाज र सोचमा छन । फिलिपिनो केटीहरु दुबईमा कमाएर आफ्नी आमालाई पैसा पठाउने गर्दछ्न । बरु केटाहरु अली बढी लफङगा हुने गरेको देखेको छु । त्यसैले पनि जोयाले काठमाडौं छोड्ने बेलामा 'टेक केयर अफ योर मम' भनिन । आमा हुनुको महत्व उनीहरुले कहिल्यै भुल्दैनन । उनले भनिन, 'आई वील वेट फर यू' उनले जीवन प्रतिको माया अझै मारेकी छैनन ।
गोठाटार काठमाडौका दीपक बुडाथोकी बिगत ११ बर्ष देखि युएईमा छन । सन २००५ मा युएई छिरेका दीपकले २ बर्ष पछी सन २००७ मा फिलिपिनो नागरिक मिला ग्रेससँग विवाह गरे । उनीहरुले पहिले क्रिस्चियन परम्परा अनुसार चर्चमा गएर विवाह गरे भने २००८ मा नेपाल गएर मिलालाई नेपाली सँस्कृति अनुसारनै धुमधाम विवाह गरे । उनीहरुसँग अहिले ५ बर्षिय योहान मन्दीप नाम गरेका एक छोरा छन । हरेक बर्ष यी दुई जोडी छुट्टी मनाउन नेपाल जान्छन । श्रीमती मिला पनि फिलिपिन्स जानु भन्दा नेपाल जानुमै खुशी हुन्छिन ।
घरमा दीपकका बुवाआमा, दाई, भाई र दिदिबहिनीहरु छन । घरखर्च पनि दीपकले नै चलाएका छन । दीपकको परिवारमा सबै दाजुभाइहरु अहिलेसम्म सगोलमा नै बसिरहेका छन । सबै हाँसी खुशी नै छन ।
किशोर र दीपक जस्तै फुजेराका पुष्कर तिमल्सिना, दुबईका लक्ष्मण लामा, रस अल खैमहका बिक्रम मेचे लगायत अबुधाबी, शारजाह र अलऐनमा यस्ता कयौ नेपालीहरु फिलिपिनो महिलासँग सफल बैबाहिक जीवनमा रमाएका छन । उनीहरुले घर परिवार हेरेका छन ।
आज सामाजिक संजालमा जोया र जीवनको बिछोडको कहानी पढ्दै गर्दा हाम्रै समाजमा मिलनका यी कहानी पनि त छन । जोया र जीवनको कहानीमा दुःख देख्नेहरुले आफ्नो सोचमा पनि परिवर्तन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । दुबईमा बस्ने मेरा एक मित्रले यो ब्लगमा नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गरे । उनको तर्क थियो, 'जतिसुकै गरे पनि हाम्रै नेपाली समाजले हामीलाई देखेर नाक खुम्च्याउछ । घुमाउरो पाराले अपहेलना गर्छ ।' त्यही भएर पनि उनी युएईको नेपाली समाजमा त्यती खुल्दैनन । 'यहाँ अर्काकी स्वास्नीसँग मोज गर्ने समाजसेवीहरु छन, मलाई देखे पछी हेयको दृष्‍टिकोणले हेर्छन ।' उनले भने, 'केही अविवाहितहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्छन । मैले त कानुन अनुसार नै विवाह गरेको हुँ ।'
यस्तै छ हाम्रो समाज । दुबईको अग्लो टावर देखेर सोच परिवर्तन नहुँदो रहेछ । अझै धेरै परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । ती सबै अन्तराष्ट्रिय जोडीलाई मेरो पनि शुभकामना ।
परदेशीको प्रश्न : स्वदेशमै काम गर्न कहिले खुल्छन् त कलकारखाना ?
काठमाडौं, फागुन ६- बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने गरी खै त काम भएको भनेर प्रश्न...
मलेसियाको कलिङ भिसा बारे यस्तो छ तयारी
काठमाडौं, फागुन ५- मलेसियाको रोजगारीमा यसअघि नै कलिङ भिसा प्राप्त गरिसकेकाहरुको विवरण संकलनको पहिलो चरण सकिएपछि बैदेशिक रोजगार विभाग ति विवरण रुजु गर्ने...
बैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई टेलिमेडिसिन सेवा दिने सरकारको तयारी
काठमाडौं, फागुन ५- सरकारले बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई टेलिमेडिसिन सेवा दिने तयारी सुरु गरेको छ । खाडी, मलेसियामा कार्यरत नेपालीलाई...